အမြန်၀ယ်လိုသည်။ - MYSTERY ZILLION
အင်တာနက် လိုင်း ၁လိုင်း - အထူးသဖြင့် y max 512 ဖြစ်လျှင်ပိုကောင်းပါသည်။
ကွန်ပျူတာ - အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်သာ (10)လုံး (use or new).
အခြား accessories များ။
မန်းတလေး တွင်အသစ်ဖွင့်မည့် အင်တာနက်ဆိုင်အတွက် အထူးသက်သာသော စျေးနှုန်းများဖြင့်သာ လိုချင်ပါကြောင်း ...........
Internet လိုင်းတော့ မသိဘူး
Computer နဲ့ပတ်သက်လို့ Laptop တွေ လိုချင်ရင်တော့ (USED) great wall shopping ဘေးက winter room မှာ
P3 ရော P4 ပါ ရနိုင်ပါတယ်
call me 91027858
I have McWill Phone for sale.
512 Internet Access
6Kyats Per min
Interested? Leave Comment below!